I-Semalt Expert: Isikhokelo sokuKhusela i-Internet Inkohliso
Ukukhula nokuhlanganiswa kwe-intanethi kwishishini kunye nentlalo yoluntu kulungile kwayeinto embi. Kwinqanaba elungileyo zininzi iinzuzo kwi-intanethi enikezela ngoshishino lwe-E. Kwaye kwicala elibi lixhalabisa ngokweneneezifana ne-cybercrime.
Phakathi kwezinye iinkxalabo ezikrakra yi-intanethi. Ubuqhetseba be-Intanethi bwenzeka xaumntu usebenzisa i-intanethi kwisenzo soqhinga ekujoliseni ukufumana inzuzo engathembekiyo ngomnye umntu. Ngokuqhelekileyo, iinjongo eziphambiliUbuqhetseba be-intanethi buncedo - smok vape mods.
Zininzi iintlobo zobuqhetseba kwi-intanethi, kodwa ezinye zivame ukubulawakunabanye.
Omnye weengcali ezinolwazi kakhulu iSemalt ,U-Andrew Dyhan, uchaza ezi ntloba ze-intanethi:
1. Iintengiso zeenkohliso kunye neMatriki
Abagwenxa beendwendwe ezijoliswe kwiintengiso ezijoliswe ngabathengi beempahla ezithengiswa ngekhompyutha. IUlwaphulo-mthetho luya kufaka umkhiqizo kwisitishi esichazela ukuba bayayithengisa kumthengi ophezulu. Imveliso ingaba yintoengekho okanye ukuba ikhona, ihluke kwizinto ezipapashwe. Umngcebisi uzama ukufumana umthengi ophumeleleyo ukuthumela intlawulo ngokupheleleyongenxa yalo mveliso ngaphambi kokuthunyelwa kwempahla. Ekugqibeleni, ulwaphulo-mthetho aluwuthumeli umthengi (okubizwa ngokuba yi-non-deliverylokuthengisa), okanye imveliso ithunyelwa yinto enye, ngokuqhelekileyo ixabiso elincinci ngaphezu kwexabiso lemveliso ehlawulwayo.
2. Iimvumi kunye noBubi besazisi
Ngezinye izihlandlo ama-imeyili athatyiswa ngabagxeki ukukhwabanisa abasebenzisi be-intanethi abangabonakaliyo okanyekubangela ingozi kwisixhobo abasebenzisayo. Ezinye ii-imeyile ezikhohlisayo zifuna ukukhanga omnye ekunikezeni ulwazi lwazo lomntu kunye nolwazi lwemali,kwaye abanye baya ekuqhubeni phambili ekukhohliseni abantu ukuba bathumele imali kwiimpawu ezingathandabuzekiyo.
Ezi i-imeyili eziyingozi ziza kungena kwibhokisi lakho lemiyalezo njengezaziso zenzalo ephantsiiimboleko, iimfuno ezifuna inkxaso-mali, i-sweepstake winnings, kunye nemiba enxulumene nobomi. Baya kuba nekhonkco ekufuneka uyenzenqakraza ukufumana oko abagxeki bathi banokubanika. Ngokuchofoza nje kwikhonkco, unokuba uzivelele kwiingozi ezininzi kuquka ukufumanaikhompyutheni yakho okanye ifowuni yeselula esuleleke kwiintsholongwane, ukutyhilela abantu abangaziwayo iiphasiwedi zakho, ulwazi lwekhadi lesikweletu, iinkcukacha zokhuseleko loluntu,iidilesi kunye neenombolo zefowuni.
Iidrafuthi zihlala zixhunyaniswa nokutshitshiswa kobunikazi kuba zikhona, kwaye zihlala zisetyenziswaukufumana ulwazi lomntu siqu olusetyenziswa kwiinjongo ezininzi kubandakanya ukuzenza..Iinkcukacha zomntu ezibiweyo zingasetyenziswa ukwenza omnyeiintlobo zobuqhetseba ze-intanethi ezifana nezicelo zobuqhetseba okanye ukuthengisa.
3. Ukweba ngeKhadi leMatyala
Ukukhwabanisa kwekhadi lokuthenga ngetyala kubaluleke kakhulu kubantu abangaboni kakuhle xa basebenzisamakhadi e khredithi. Abanye abantu badukiswa ngetekisi eziphambili zobuqhophololo.
Olu hlobo lobuqhetseba be-intanethi luqala xa ixhoba libandakanya iinkcukacha zekhadi lesikweletu kwilewebhu. Izigwenxa ziya kusebenzisa le nkcazelo ukuba zenze imali yokudluliselwa okanye ukuthenga usebenzisa ikhadi lekhredithi.
4. Investment Scams
Ubuqhetseba bokutsalwa kwemali kutyalwa ngamacandelo otyalo-mali kunye neinjongoukukhwabanisa abatyala-mali okanye ukutshitshisa ulwazi lwabo. Izikratshi ziza kwifom yeebhodi zeendaba, iifolda zentlawulo, okanyeezinye iinkcukacha zolwazi olubonelela ngoncedo lwangaphakathi lobuxoki. Xa inani labatyalomali liwela ukuhlaselwa, ixabiso lesitokisiziguqulwa kwaye ulwaphulo-mthetho uzithengisa iimpahla zakhe kwisithuba esincomekayo.
Ezinye iintlobo zobuqhetseba be-intanethi ziquka iiwebhusayithi ezingathembekiyo kunye nokuhlawula imali.
iiwebhusayithi ezingathembeki zingalinganisa ii-sites ezisekelwe kakuhle kunye neendwendwe ezikhohlisayoukuthengiselana kunye nokusebenzisana ngokungathi beyinto engokoqobo. Imirhumo yokuhlawula iqhubekile ininzi kweli hlabathi lezo shishino. Uyakwazi ukubonaolu hlobo logaxekile ngokulula. Ukuba umthengisi ugxininisa ekubeni nemali ngaphambili kwaye uthembisa ukuba abuyisele imali, ukusebenzisana kakhulumhlawumbi kube ngumngcipheko. Ukukhwabanisa kwangaphambili kunokwenzeka kakhulu kwiintengiso ze-intanethi, ngakumbi.
Wonke umntu kufuneka ahlaziye rhoqo malunga nendlela abakwa-scammers abaqhuba ngayo intanethiulwaphulo-mthetho ngasiphi na ixesha. Nazi izicebiso ezimbalwa:
Qinisekisa ukuba nayiphi na isayithi yokuthengisa ofuna ukuyisebenzisa iyathembeka kwaye iphephe abathengisi abatsha.
Ukusebenzisa indlela yokukhokha ekhuselekileyo nekhusekileyo.
Ungaze uqakraze umnxeba uthunyelwe nge-imeyile ngaphambi kokuqinisekisa ukuba umthomboi-imeyile inokuthenjwa.
Ungaze uvumele ikhadi lakho lekhredithi lisetyenziswe ngaphandle kwamehlo akho
Yinyamekela xa wenza intsebenziswano enkulu okanye uphendule kwiintengiso ezenziwe kwi-intanethi.
Njalo khangela iirisiti zakho ukuqinisekisa ukuba zonke izixa zichanekile.
NGAPHELA ubhale inombolo yakho yekhadi yekredithi.
Ingaba ikhadi likhansekile xa ungayifaki.
Njalo khangela ukuba uqinisekise iwebhusayithi ofuna ukuyisebenzisa yakho kwayeIdata yemali kwi-URL iqala nge-https: //.